Karakarain'ny dia Thai: hifidy amin'ny andro fampihenana ny governemanta
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Karakarain'ny dia Thai: hifidy amin'ny andro fampihenana ny governemanta
Thai travel quarantine
Betsaka ny tolo-kevitra naroso tamin'ny Governemanta Thailand momba ny famahana ny quarantine fitsangatsanganana mba hanamafisana ny fizahan-tany ao amin'ny firenena.
Rahampitso 16 martsa, hivory ny Kabinetra Thailandy handinika ny fampidinana ny isan'andron'ny quarantine ho 7.
Eo amin'ny docket ihany koa dia misy tolo-kevitra iray ho an'ny Resort Quarantine izay ahafahan'ny mpitsidika mandehandeha any amin'ny toeram-pialan-tsainy raha toa ka nisedra toetra ratsy ny COVID-19 izy ireo ary rehefa avy nitoka-monina tao amin'ny efitranony nandritra ny 3 andro.
Mbola tsy matoky ny tompon'andraikitra Thai ny amin'ny fanesorana ireo fepetra takina amin'ny quarantine ho an'ireo mpandeha izay vita vaksiny feno.
Soso-kevitra ny hampihenana ny quarantine fitsangantsanganana Thai tsy maintsy atao mandritra ny 14 andro ka hatramin'ny 7 andro ho an'ireo mpizahatany vita vaksiny ary hamorona Resort Quarantine vaovao dia ho eo amin'ny latabatra amin'ny fivorian'ny kabinetra Thai ny talata 16 martsa 2021.
Nisy soso-kevitra maromaro hampihenana na hanovana ny fitsipiky ny quarantine coronavirus antenaina mamelombelona ny fizahantany any ivelany. Noho ny fanerena goavambe avy amin'ny indostrian'ny fizahantany hanafoana ny quarantine mandatory, izay ambaran'ity sehatra ity fa manimba ny fizahan-tany avy any ivelany, ny governemanta dia miroso tsimoramora amin'ny fanalefahana ny fameperana ho an'ireo nanao vaksinina tamin'ilay virus.
Saingy toa tsy mihetsika ny tompon'andraikitra mailo mba hanafoanana ny fepetra takin'ny karantina na dia vita vaksiny tanteraka aza ny mpandeha. Ny tolo-kevitra farany dia hampihena ny fotoana ao anatin'ny antsasaky ny 7 andro raha nanao vaksiny ny mpandeha iray tao anatin'ny 3 volana lasa ary nanao fitsapana ratsy COVID-19 tao anatin'ny 72 ora nisidihany.
Tolo-kevitra iray hafa - quarantine fampiantranoana - no hamela ny mpizahatany tsy manao vaksiny mandehandeha eny amin'ny toeram-pialan-tsasatra iray manontolo rehefa avy nanandrana ratsy ny COVID-19 taorian'ny fitokanana 3 andro tao amin'ny efitranony. Tsy afaka nandao ny tokotanin'ny hotely nandritra ny 2 herinandro anefa izy ireo.
Ny minisiteran'ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena dia mahita fa hitrandrahana quarantine hampiasaina any Pattaya, Phuket, Krabi, Koh Samui, Surat Thani ary Chiang Mai.
Ny mpitsidika UK any Thailand dia miatrika birao lehibe
Na dia samy loharanom-pahalalana avy amin'ny governemanta Thai sy Angletera aza dia samy maneho ny fahatokisany ny ho avy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany iraisam-pirenena, dia maniry izany ny mpandeha rehetra avy any Angletera mitsidika an'i Thailand Tokony hanome avalanche antontan-taratasy ary hiaritra ny fahatarana voafetra any amin'ny firenena roa tonta.
Ireo mpitsangatsangana mety dia tsy maintsy aseho amin'ny teboka fiaingan'ny UK endrika feno iray ny antony ilana ny dia amin'ny antony ara-pahasalamana, asa, fianarana na fangorahana. Notoroana hevitra izy ireo mba hitondra porofo fanadihadiana, mazàna taratasy ofisialy, mba hanamarinana fa tapaka ny hidin'ny fivezivezena.
Ny brits miverina any UK avy any Thailand dia tsy maintsy mameno endrika mpamantatra mpandeha, mampiseho porofo ny fizahana ratsy COVID-19 farany teo, ary mitokana mandritra ny 10 andro miaraka amin'ny fitsapana roa fanampiny.
Nanambara ny manampahefana anglisy fa “tsy ara-dalàna” ny fitsangatsanganana an-dranomasina any ivelany mandra-pahatongan'ny fotoana hafa, miaraka amin'ny tapaky ny Mey ho daty fanamaivanana haingana indrindra.
L'Auberge Del Mar dia manolotra fihenam-bidy 50% amin'ny taha tsara indrindra + Fanapahana tampoka fanovana
Ny Uganda Airlines dia miantoka ny laharam-pahamehana fiantsonana voalohany any London Heathrow